မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2017-02 > ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 21) ၏မိုင်းများ
“ ကားကိုမင်းနဲ့အတူရပ်လိုက်မယ်” ဟုတွမ်ကဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်အားပြောခဲ့သည်။ "ရှစ်ပတ်ကြာရင်ငါပြန်မလာရင်ငါအသက်ရှင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး" အရူးတစ်ယောက်ကအရူးတစ်ယောက်ကိုကြည့်နေသလိုသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ «ရှစ်ပတ်လား။ ခင်ဗျားဒါကိုနှစ်ပတ်ကြာအောင်မထားနိုင်ဘူး တွမ်အညိုရောင်ဇွန် တစ် ဦး အသည်းအသန်စွန့်စားသည်။ သူ၏ရည်မှန်းချက်မှာသူသည်မြောက်အမေရိကရှိအခြောက်ဆုံးနှင့်ခြောက်သွေ့ဆုံးသောဒေသဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အပူဆုံးဒေသဖြစ်သည့် Death Valley သဲကန္တာရ၌ကြာရှည်ခံနိုင်မနိုင်ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သူသည်သဲကန္တာရအခြေအနေများအကြောင်းအရင်ကသူမမြင်ဖူးသောအရာများအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ သူသည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ရေမဆာခဲ့ပါ။ အဓိကသောက်သုံးရေမှာနှင်းဖြစ်သည်။ သူသည်ညတိုင်းနှင်းရည်ကိုဖမ်းရန်ကိရိယာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသဖြင့်နံနက်ခင်းတွင်ရေချိုလုံလုံလောက်လောက်ရရှိခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲတွမ်ကပြက္ခဒိန်ကိုပျောက်ဆုံးသွားပြီးကိုးပတ်အကြာမှာအိမ်ပြန်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူသည်သူ၏ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်နှင်းမကျဘဲသူအသက်ရှင်ကျန်ရစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံသည်။
နှင်းရည်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် တွေးသလဲ။ ငါလိုပါပဲ၊ မကြာခဏမဟုတ်ပါ - မနက်ခင်းမှာ မင်းရဲ့လေကာမှန်ကို နှင်းရည်မသုတ်ဘဲနဲ့။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ကားပြတင်းပေါက်များပေါ်မှ မိုးရွာသွန်းမှုထက် နှင်းများ (သို့မဟုတ် ခရစ်ကတ်ကွင်းအတွင်း ကမောက်ကမဖြစ်စေသော အရာတစ်ခု) ထက်ပိုပါသည်။ သူသည် အသက်ပေးလှူသူဖြစ်သည်။ လန်းဆန်းစေပြီး ရေငတ်ခြင်းကို ပြေလျော့စေကာ လန်းဆန်းစေသည်။ နယ်ပယ်များကို အနုပညာလက်ရာများအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
နွေရာသီအားလပ်ရက်မှာလယ်ထဲမှာမိသားစုနဲ့အတူရက်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့မကြာခဏစောစောထနှင့်ငါ့အဘနှင့်ငါအမဲလိုက်သွား၏။ ပထမ ဦး ဆုံးနေရောင်ခြည်များကသစ်ပင်များပေါ်၌နှင်းကျခြင်း၊ မြက်ပင်များနှင့်အပင်များသည်စိန်များကဲ့သို့တောက်ပနေသည့်အခါနံနက်၏လတ်ဆတ်မှုကိုငါမမေ့ပါ။ ပင့်ကူအိမ်သည်ရတနာကြိုးများနှင့်တူသည်။
နယပုံပြင် ၁ ပါစကားအားဖြင့် မကြာသေးမီအထိ နှင်းကို ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ။9,12 အတွေးပေးခဲ့ပါတယ်။ “ရှင်ဘုရင်၏ အရှက်ကွဲခြင်းသည် ခြင်္သေ့ဟောက်သံနှင့်တူ၏။ ကျေးဇူးတော်မူကား၊ မြက်ပင်ပေါ်မှာ နှင်းနှင့်တူ၏။
ငါ့ရဲ့ ပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုက ဘာလဲ။ “ဒီလိုင်းက ငါ့အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ငါသည် ရှင်ဘုရင်မဟုတ်၊ ငါသည်လည်း ရှင်ဘုရင်လက်အောက်၌ မနေရ။" တစ်ခုခုကို တွေးပြီးရင် ငါ့မှာ တစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်။ ဘုရင်တစ်ပါး၏ အရှက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ခြင်းကို ခြင်္သေ့ဟောက်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရန် မခဲယဉ်းပါ။ လူတွေ (အထူးသဖြင့် အာဏာရှိသူ) တွေရဲ့ ဒေါသကို ဆွဲဆောင်တာက ကြောက်စရာကောင်းတယ် - ဒေါသထွက်နေတဲ့ လီယိုနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ မတူပါဘူး။ မြက်ခင်းပေါ်မှာ နှင်းရည်လို ကျေးဇူးတရားကကော။ ပရောဖက်မိက္ခာ၏ရေးသားချက်များတွင်၊ ဘုရားသခင်အပေါ်သစ္စာရှိကြောင်းပြသသောလူအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်။ သူတို့သည် “သခင်ဘုရားထံမှ နှင်းရည်ကဲ့သို့၊ မြက်ပင်ပေါ်၌ မိုးရေကဲ့သို့” ဖြစ်လိမ့်မည်။ (မိ 5,6).
အသီးအရွက်များပေါ် နှင်းနှင့်မိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဲ့သို့ပင် ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများကြားတွင် ၎င်းတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည် လန်းဆန်းပြီး အသစ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလားတူပင်၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရသူများ၏ဘ၀တွင် ဘုရားသခင်၏နှင်းရည်များဖြစ်သည်။ အပင်တစ်ပင်သည် ၎င်း၏အရွက်များမှတစ်ဆင့် အသက်ပေးသောနှင်းကိုစုပ်ယူကာ ပွင့်လန်းစေသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား၏အသက်ကို ဤလောကသို့ ယူဆောင်လာရန် နည်းလမ်းဖြစ်သည် (1. ဂျိုဟန် 4,17) ဘုရားသခင်သည် နှင်းရည်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည် (ဟောရှေ ၁4,6) သူသည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အား ဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အခြားသူများ၏ဘ၀တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှင်းရည် မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ နယပုံပြင် ၁9,12 ထပ်ဆင့်ထောက်ပြသည်– “အမျက်ထွက်သော မင်းကြီးသည် ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း ဖော်ရွေမှုသည် မြက်ခင်းပေါ်ရှိနှင်းနှင့်တူ၏” (NCV)။ ကြင်နာသောစကားသည် လူတို့ကို တွယ်ကပ်နေသော နှင်းစက်ကဲ့သို့ဖြစ်စေနိုင်သည် (5. မွန် ၃2,2) တစ်ခါတရံတွင် တစ်စုံတစ်ဦးကို လန်းဆန်းတက်ကြွစေရန်အတွက် အနည်းငယ်ကူညီခြင်း၊ ပြုံးပြခြင်း၊ ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ အထိအတွေ့၊ လက်မထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးအား ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် သဘောတူညီမှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများအတွက်လည်း ဆုတောင်းနိုင်ပြီး သူတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်း မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်များတွင် နှင့် ကစားပွဲများတွင် ကိုယ်တော်၏ရောက်ရှိခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း Jack သည် မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်အား အောက်ပါ ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြသည် ။
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးလင်းကလပ်မှာကျွန်တော်သုံးနှစ်ကျော်နေပြီ။ ကစားသမားအများစုသည် 13pm တွင်ရောက်ရှိပြီးဂိမ်းသည်မိနစ် ၄၀ ခန့်တွင်စတင်သည်။ ဤအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းကစားသမားများအတူတကွထိုင်။ စကားပြောကြသည်။ သို့သော်ပထမနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကားထဲတွင်နေပြီးကျမ်းစာသင်အံမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကစားသမားတွေကသူတို့ရဲ့ဘောလုံးတွေကိုယူလာတာနဲ့အမျှငါဘောလုံးလောင်းကစားအစိမ်းကိုသွားချင်တယ်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကလပ်အသင်းအတွက်လေ့လာမည့်အစားတစ်ခုခုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလယ်ကိုရှာဖွေနှင့်တန်ပြန်inရိယာ၌အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့သည်။ မျက်မှန်များစွာကိုရေစုပ်မှဖယ်။ ပေါက်ဖွားနိုင်သည်။ ကလပ်ခန်းတွင်ရေ၊ ရေခဲနှင့်အအေးအချိုရည်များနှင့်ဘီယာများပါ ၀ င်သည်။ နာရီဝက်လောက်ကြာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ပျော်ခဲ့တယ်။ ဘိုးလင်းအစိမ်းရောင်သည်သူငယ်ချင်းများကိုအဆုံးသတ်ရန်နေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းမိသည်နှင့်လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုထိမိခဲ့ရာကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးကိုဆက်လက်ထားရှိခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်မည်မျှအံ့အားသင့်သွားသည်ကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ သူကကျွန်တော့်ဆီလာပြီး“ ဒီနေရာကိုရောက်နေတာကကလပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါ။
၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်းသိသာထင်ရှားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြက်ခင်းပေါ်နံနက်ယံနှင်းကဲ့သို့။ ငါတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသူတွေရဲ့ဘ ၀ ကိုတိတ်တိတ်လေးနဲ့ကြင်ကြင်နာနာနဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်တယ်။ သင်လုပ်သည့်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်တော့မှလျှော့မတွက်ပါနှင့်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ယုံကြည်သူ ၁၂၀ နှင့်ပြည့်ခဲ့သည်။ သူတို့ကမင်းနဲ့ငါလိုသာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ "ကမ္ဘာကိုဇောက်ထိုးလှည့်ဖြားခဲ့" တဲ့သူတွေပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နှင်းစက်နှစ်ရာမကျစေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဒီစကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် အမြင်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် အာဏာပိုင်ရာထူးတစ်ခုရသောအခါတွင် သင်၏လက်အောက်ငယ်သားများတွင် သင်၏အပြောအဆိုနှင့် အပြုအမူများ မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကို စဉ်းစားရန် အရေးကြီးသည်။ အလုပ်ရှင်သည် ကြင်နာခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း ရှိသင့်သည် (သု ၂၀း၂၈)။ ခင်ပွန်းသည်သည် မိမိမယားအပေါ် ဘယ်သောအခါမျှ မရိုင်းစိုင်းသင့်ပါ။ (ကောလောသဲ၊ 3,19) မိဘများသည် သားသမီးများကို အလွန်အမင်းဝေဖန်ခြင်း သို့မဟုတ် အထက်လူကြီးဖြစ်ခြင်းဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည် (ကောလောသဲ 3,21) အဲဒီအစား ရေငတ်ပြေပြီး လန်းဆန်းစေမယ့် နှင်းရည်လို ဖြစ်ပါစေ။ သင့်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွင် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၏အလှကို ထင်ဟပ်ပါစေ။
တ ဦး တည်းနောက်ဆုံးအတွေး။ Dew သည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည် - လန်းဆန်းစေသည်၊ သို့သော်တစ်ခုဖြစ်လာရန်ကြိုးစားနေစဉ်နှင်းတစ်စက်သည်ချွေးမထွက်ပါ။ သင်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ရှိခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဘုရားသခင်၏နှင်းရည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာစီမံကိန်းများနှင့်မဟာဗျူဟာများမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာသဘာဝပါပဲ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ယေရှု၏ဘဝကိုဖန်တီးသည်။ သူ၏ဘဝအသက်တာသည်သင့်အားဖြတ်သန်းသွားရန်ဆုတောင်းပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ - နှင်းအနည်းငယ်တစ်စက်။